Izinyathelo zokuthweswa iziqu ukuthi abafundi baziphothule ngempumelelo yini zonke izidingo zokusuka esikoleni esiphakeme. Ukuthweswa iziqu kufaka futhi inkomba yamandla ediploma ekala ukuthi iziqu zigcwalisile yini izidingo zokuphakanyiswa kwediploma yaseIndiana noma ngaphezulu futhi azange zithole ukuyekelela kusukela ekuhlolweni kweziqu noma izidingo zomendo wokuphothula. Izitshudeni eziseqenjini eliphothulwe kakhulu kulesi sikole zifakiwe lapho zibika imininingwane yokuthweswa iziqu. (Umthombo wedatha: 2018-2019 cohort)
Athini amazinga okuphothula lesi sikole?
Izinyathelo zokuthweswa iziqu ukuthi abafundi baziphothule ngempumelelo yini zonke izidingo zokusuka esikoleni esiphakeme. Izinyathelo zokuqina zeDiploma ukuthi ngabe abafundi bazifezile yini izidingo zeDiploma lase-Indiana noma ngaphezulu, futhi azange zithole ukwehla kunoma yiziphi izidingo zokuphothula.
Abafundi bathweswa iziqu kungakapheli iminyaka eyi-4
Isilinganiso Sombuso 86.4%
Isilinganiso Sombuso 70.8%
Ngabe basebenza kanjani abafundi kulesi sikole uma kuqhathaniswa nemikhawulo yesikhashana yombuso yeZinga Lonyaka Lokwethweswa Iziqu Namandla Okuqina Kwediploma?
Okuhlosiwe kwesikhashana kukhombisa inqubekelaphambili elindelekile edingekayo ukufeza izinhloso zokuphothula isikhathi eside zombuso.
Yiziphi iziqu zokuqokwa iziqu abafundi abaphothula kulo mholo abahola kuwo?
Imininingwane ngezidingo zediploma yaseIndiana ingatholakala ku-https: //www.doe.in.gov/graduation-pathways
Isilinganiso Sombuso 9.7%
Isilinganiso Sombuso 50.5%
Isilinganiso Sombuso 39.8%
Isilinganiso Sombuso 12.1%
Sinjani isimo sabafundi kulesi sikole abangatholanga idiploma kungakapheli iminyaka emine?
Le mikhakha imele abafundi abasasesikhungweni sesikole, kodwa abangazange bahlangabezane nezidingo zokuthweswa iziqu ngaphambi kukaSepthemba 30 wonyaka wokuthweswa iziqu kweqembu labo.
Isitifiketi sokugcwaliswa kwezifundo
Isilinganiso Sombuso 0.1%
Isitifiketi Semfundo Ekhethekile
Isilinganiso Sombuso 1.2%
Ukulingana kwesikole samabanga aphezulu
Isilinganiso Sombuso 5.2%
Isilinganiso Sombuso 5.9%